(Saadaal): Mustaqbalka soomaalida Norwey waa: Gabdhaha, Hablaha iyo Haweenka. - NorSom News
(Saadaal): Mustaqbalka soomaalida Norwey waa: Gabdhaha, Hablaha iyo Haweenka.
Inta aadan gudo-gelin aqrinta qormadan, waxaa kaa codsaneynaa inaad marka hore mudo hal daqiiqo ah aad fiiriso sawirka kore. Waa kulan ay isugu yimaadeen ardeyda soomaaliyeed ee Norway, bal qiyaas imisa ayaa gabdho imisa ayaase wiilal ah.
Marka ugu horeyso ee aad aragto cinwaanka aan u dooraney qormadan, waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso, tolow maxey ka wadaan, sidee jaaliyad dhan mustaqbalkeeda dusha loogu saari karaa gabdho. Waxaa hubaal ah in marka aad aqrisaan qodobada hoos ku qoran, aad nala garwaaqsan doontaan ama ugu yaraan aad madaxa u ruxi doontaan.
Dhamaadkii bishii August ee sanadkan ayaan booqasho ku tagney jaamacada Oslo iyo Høgskolaha HIOA, anaga oo halkaas warbixino kaga soo diyaariney ururka ardeyda soomaaliyeed ee Norwey, SSF. Warbixintaas oo sheegaysay in ardeyda soomaaliyeed ee jaamacadaha wax ka barato ay sadex jibaarbeen(3x) mudo afar sano gudahood ah, Iyo in qiyaas ahaan 70% ardeyda soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacaha ay yihiin Gabdho.
Marka koowaad waa wax lagu farxo in dhalinyaradeena wadanka ku kortey ay jaamacadaha buux dhaafiyaan, waa iftiin iyo yididiilo cusub oo usoo bidhaameyso jaaliyadeena soomaaliyeed ee Norwey. Marka labaad waxaa ogaaney qodobadan hoos ku xusan, taas oo sababtey inaan maqaalkan soo daabacno:
Ardeyda soomaaliyeed ee ugu badan ee dhigato dugsiyada sare, qaybtiisa maadooyinka cilmiga waa gabdho.
Ardeyda soomaalida ah ee ugu badan ee dhameysata dugsiga sare waa gabdho.
Ardeyda soomaaliyeed ee natiijooyinka ugu sareyso kaga baxdo dugsiyada sare waa gabdho.
Ca.70% ardeyda soomaaliyeed ee wax ka barata xiligan hada la joogo jaamacadaha waa Gabdho.
Ardeyga soomaalida ah ee dhigata kuliyadaha ugu adag ee lasoo galo ama la dhigto jaamacada, waxey u badanyihiin gabdho. Tusaale ahaan Medisin iyo Tannlege waxey kamid yihiin maadooyinka ugu adag ee lasoo galo. Norwey waxaa intaan ka warqabno medisin dhigato ilaa 8 ardey oo soomaali ah, 5 kamid ahna waa gabdho.
Ardeyda soomaaliyeed ee xiligii loogu tala galey ku dhameysata jaamacadaha waa gabdho. Tusaale ahaan hadii wiil iyo gabar soomaali ah ay wado qaataan maado soconeyso sadex sano, gabadhu sadexdii sano ayay uga baxdaa, halka wiilkuna inta badan uu afar ama wax ku badan uu maadadii kusii rafto.
Ardeyda ugu badan ee xaasaska ah ama caruurta leh, jaamacadahana dhigto waa gabdho. Logikk ahaan waxaad isleedahay in gabdhuhu hadey caruur dhalaan ay guriga fariistaan, laakiin raagow sidaas xaalku ma ahan hada, ee hada raga ayaa guriga fadhiyo.
Inta badan gabdhaha soomaalidu shaqo wey ku helaan aqoonta ay jaamacadaha kaga soo baxeen. Sababtuna waxaa weeye, waxey marka horeba doortaan aqoon suuqa shaqada looga baahanyahay sida Sykepleier iwm. Waxaad arkeysaa wiil shan sano ingineer baranayey oo taxi wada iyo gabar 3 sano jaamacad dhiganeysay oo shaqo profesjon ah ka shaqeyso.
Soomaalida ugu badan ee ku shaqeyso aqoon ay jaamacad ama dugsi sare kusoo barteen waa gabdho. sykepleier, helsesekretær, vernepleier, bio-ingeniør, barnevernspedagog, sosionom, sosialarbeider, iwm
Gabo-gabo: Maadaama ay gabdhaha, dumarka iyo haweenka soomaaliyeed Norway ku dhaqan ay raga kaga horeeyaan intaas oo meelood, waxaa xaqiiqo ah iney ayagu yihiin mustaqbalka iyo hogaamiyayaasha barito ee jaaliyadan. Waxaan sidaas u leenahay Norway waxaa ka shaqeeyo aqoon, xirfad iyo maxaa taqaan, sadexdiina waxaa hada hormuud ka ah gabdhaha.
F.G: Baaritaankan waa mid aan anagu gaarkeena u sameynay, anaga oo adeegsaneyso aqoonta aan u leenahay bulshadeena soomaaliyeed ee Norway, gaar ahaan qeybta waxbarashada, maadaama aan anagu nahay ardey jaamacada dhigato.
Previous articleM.Camaleeti: 95% degmooyinka Norway wax qorshe ah ugama tagsana cunsuriyada sii kordheysa.
Next articleListhaug oo lagu eedeeyay celinta qoxootiga soomaaliyeed, iyada oo norwiijiga looga digayo iney u safraan Soomaaliya